जीवनी :: Rajendra Gautam
Rajendra Gautam मुख्य पृष्ठ > जीवनी Search site Search site
पश्चिम नेपालको मध्यपहाडी जिल्ला बागलुङको दक्षिणपूर्वतिर एउटा रमाइलो सल्यान गाउँ छ। मेरो जन्म सल्यान-४, मा विक्रम सम्बत् २०४८ साल असार २४ गते बुधवार (०८ जुन १९९१) का दिन एक परिवारमा भएको हो । जन्मकुण्डलीमा यही लेखिएको छ । आमा राधिका गौतम र बाबु निर्मल गौतमको म दोस्रो सन्तान हुँ । म माथि एक दिदि हुनुहुन्छ - 'इन्दु' हाल जापानमा आफ्नो पारिवारिक जीवन बिताइरहनु भएको छ। म पश्चिम नेपालको परम्परागत खरको छानो भएको घरमा जन्मेको हुँ । यो घर हजुरबाले बि.सं. २०२१ तिर बनाएको भन्नुहुन्थ्यो । घरमा साँझबिहान प्रयोग हुने उत्पादनका साधन, आँसी, बाउसो बञ्चरो, फाली करुवा, नाम्लो आदि राख्ने र ठाउँठाउँमा खोपाहरूको व्यवस्था त्यस्ता घरको बिशेषता नै हो । घरभित्र चुलो, चौको, अँगेनो, ठेकाभाँडा राख्ने निश्चित ठाउँको तारतम्य मिलाइएको हुन्छ । त्यति सानो घरमा ४/५ जनाको संयुक्त परिवार कसरी अटे होला अहिले आश्चर्य लाग्छ । त्यसमा पनि सिकुवामा ढिकी र ढोकाको छेवैमा मकै पिस्ने जाँतो गाड्ने रोस सबैतिर थियो । म जन्मेको घर अहिले भत्किसकेको छ । आजभोली म घुम्न जादा जन्मेको ठाउँमा भग्नावशेष मात्रै देखछु । साथीभाईलाईर् म जन्मेको यही ठाउँ थियो रे भन्दै देखाउँछु । मलाई जन्मदिँदा आमा यो कुनामा प्रशव पीडाले कति छटपटाउनु भएहोला ? मलाई गर्भबाट ओरालेर यस धर्तीमा लालनपालन गर्ने, पढालेखा बनाउने जननी र जन्मभूमिप्रति म सधैं ऋणी छु । मैले जति गरेपनि आमाको दुधको भारा चुकाउन सक्ने छैन ।
हाम्रो वंशावली गोविन्द गौतममा गएर टुंगिएको छ । गोविन्द भन्दा पहिले को थिए भन्ने कुरा थाहा छैन । म जान्नेसुन्ने भए पछि वंशावलीबारे हजुरबालाई सोधेको थिएँ । उहाँले पनि गोविन्द भन्दा बढी भन्न सक्नुभएन । तर पनि पितृलाई सम्झने बेला क्रमशः (गोविन्द गौतम, दामु गौतम, सानै गौतम, महादेव गौतम, पूर्णचन्द्र गौतम, पुरनधर गौतम, रामेश्वर गौतमको नाम हजुरबाले लिनुहन्थ्यो । मेरो हजुरबाको बाजेको नाम पुरनधर र बाबुको नाम रामेश्वर थियो भन्ने कुरा पुराना लिखतबाट थाहा हुन्छ ।
तर हाम्रा नजिकका दाजुभाई को को हुन् भन्ने कुरा ठ्याक्कै यकिन छैन । पुरनधरका छोरा मद्धे रामेश्वर मेरो हजुरबाको बुबा र पशुपति काका भन्ने कुरा वंशावली मा भेटिएको छ तर पशुपतिहरु बर्मा गयको र घर नफर्कियको तर पछिल्लो समयमा पशुपतिका सन्ततिहरु बिराटनगरमा बसोबास गर्दै आई रहेको थाहा भएको छ! हजुरबाहरू समेतले हामी नजिकका दाजुभाई हौं भन्दै र मान्दै आएका छन् तर यो सम्बन्ध कति पुस्ता नजिकको हो भन्ने एकिन छैन । एकपटक बिराटनगर गएर वंशावलीबारे सोधखोज गर्ने विचारलाई मैले अहिलेसम्म पुरा गर्न सकेको छैन ।पशुपतिका